फेरि एउटी द’लित युवतीमाथि यस्तो दुःखद घटना, जिब्रो नै छैन! – PathivaraOnline
Home > अपराध > फेरि एउटी द’लित युवतीमाथि यस्तो दुःखद घटना, जिब्रो नै छैन!
admin October 1, 2020 अपराध, समाज	0
भारतमा अर्को निक्कै दु:खद घटना घटेको छ । भारतको उत्तरप्रदेश हाथरसमा दुई साताअघि सि’कार भएकी एक दलित युवतीको मृत्यु भएको छ । दिल्लीको सफदरजंग अस्पतालमा उपचारार्थ १९ वर्षीया ती युवतीको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।
घटना दिल्लीबाट करिब दुई सय किलोमिटर टाढा उत्तरप्रदेशको हाथरस गाउँमा घटेको हो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा १४ सेप्टेम्बरमा गाउँकै कथित उच्च जातका पुरुषहरुले परिवारका अन्य सदस्यसँगै । घाँस का’ट्न गएका बेला ती युवतीलाई ब’लपू’र्वक उक्त ब’ज्रपा’त भएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनको ज्रि’बो फा’ल्नुका साथै घाँ’टीमा पनि हा’निएको गरिएको थियो ।
गम्भीर घाइते ती युवतीलाई पहिले अलिगढस्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई सोमबार मात्र दिल्लीको सफदरजंग अस्पताल लगिएको थियो । प्रहरीले घटना संलग्नमा चार जनालाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ ।
प्रहरीले उनीहरुमाथि गम्भीर मुद्दा लगाएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार । मृतकको परिवार र आरोपितका परिवारबीच लामो समयदेखि रिसइबी थियो । घटनालाई लिएर उत्तरप्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरिएको छ । राष्टिय सन्चार ड्ट्कम बाट साभार
अन्तत: बला’त्कारपछि ह’त्या गरिएकि सम्झनाको आठ दिनपछि दा’हसं’स्कार
जनताहरूकाे यस्तो पीडा देखेपछि कुमारले भनेः सरकारी गाडी जनताका लागि होइन रहेछ, पास दिए म आफै घरसम्म पुर्याइदिन्छु!